5 Amaphutha Esabelomali Sokukhangisa Okufanele Uwagweme | Martech Zone
Esinye se-infographics esabiwe kakhulu ebesikhuluma naso Izabelomali Zokukhangisa ze-SaaS nokuthi amaphesenti aphelele wemali engenayo ezinye izinkampani ebeziyisebenzisa ukugcina nokuthola isabelo semakethe. Ngokubeka isabelomali sakho sokumaketha kumaphesenti wemali engenayo, inikeza iqembu lakho lokumaketha ukuthi likhuphule ngokwengeziwe ukufunwa njengoba iqembu lakho lokuthengisa liyidinga. Izabelomali eziphansi zikhiqiza imiphumela eyisicefe… ngaphandle kokuthi uthole ukonga kwenye indawo kumxube.
Lokhu infographic kusuka MDG Advertising, Amaphutha ama-5 amakhulu wokukhangisa wesabelomali okufanele uwagweme, kukhombisa izindawo ezinhlanu lapho amaphutha ekwahluleleni aholela ekusetshenzisweni kwemali ngendlela engafanele nokuthi ungasibeka kanjani phambili isikhathi sakho, amandla nesabelomali lapho usebenzisa amasu wokumaketha.
Amaphutha Esabelozimali Sokumaketha:
Ukuqala Ngemininingwane Engalungile - Izinkampani zikholelwa ukuthi i-32% yedatha yazo ayinembile, ngokwesilinganiso. Le datha engathembekile, esukela kokungaqondakali analytics amadeshobhodi anezikhala ezinkulu kulwazi lwamakhasimende, luxhuma ngqo kukhetho lwesabelomali esingalungile.
Ukwehluleka Ukudidiyela Nokuthengisa - Ama-50% wabathengisi abanelisekile ngemizamo yokuthengisa yabo. Isabelomali ngasinye sokumaketha kufanele senziwe ngokuhlanganyela neminye iminyango, ikakhulukazi ukuthengisa. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa ngakunye kufanele kuxhunywe ngqo kumphumela webhizinisi olindelekile.
Ukutshala imali ngaphansi kwama-Proven Workhorses - Abathengisi abangama-52% bathi i-imeyili ingenye yeziteshi ezisebenza kahle kakhulu abazisebenzisayo kepha abathengisi bavamise ukufaka isabelomali kwamanye amasu naphezu kokusebenza kahle kwe-imeyili. Kubalulekile ukuqhubeka nokwandisa utshalomali kulokho osekuvele kusebenza.
Ukubukela phansi Ijubane Loshintsho - Ku-2017, idijithali kulindeleke ukuthi iphendule i-38% yenani eliphelele lokusetshenziswa kwezikhangiso zase-US, futhi ubuchwepheshe obuningi obusha buyavela obungaxhasa ukukhuphuka okusheshayo okunikezwe yidijithali eminyakeni ezayo.
Ukuhlola Okuncane Kakhulu, Kakhulu Ngokuvamile - Izinkampani ezingama-70% azihloli imikhankaso yokuthengisa nabathengi njalo. Abathengisi badinga ukuvivinya ngokushesha futhi banciphise phakathi kwezindlela zokumaketha, iziteshi, namasu besebenzisa i isu lokukhangisa beshesha.
Tags: idatha emibiisabelomaliukushintshaIdathaimeyili Marketingukuhlolamarketingisabelomali sokumakethanewUkunika Amandla Ukuthengisatesting
Aug 14, 2017 ngo-10: 02 PM
Manje ngiyi-COO yesifukamisi sasemadolobheni lapha e-Indy, eGreyini. Futhi into eyodwa engingabonakali ngiyishayela ekhaya ngokwanele ukubaluleka kwedatha. Siphila emhlabeni onedatha eningi, i-analytics, kanye nekhono lokusebenzisa ngempela lolo lwazi ukwenza izinqumo ezi-SMARTER. Noma kunjalo, nginezingxoxo eziqala ngokuthi, ".. Ngizizwa ngathi .." noma "… ukuthi kubukeka kanjani kimi…". Ngiyabuza, uthathe hlobo luni lwesampula? Ngabe leyo datha ikhombisa ini?
Le infographic epholile kakhulu, futhi ngiyabonga ngokuhlakanipha kwakho. Manje, ngiya kwi-webinar kwamanye ama-saas e-imeyili